Kuunganidzwa kweVatengi veDhijitari - Tamban RELAY
By bryamangwanabe On June 16, 2020
Nzira Yekubatanidza inovavarira kuve pachikuva chevamabhizinesi vechidiki emakambani eAfrica. Iyo inotsigira kuvandudza kwenyika yedu inodikanwa kuburikidza nesimba, uye kushaya simba kwehudiki hwayo. Iye anotenda pakuva nani kune vese vechidiki ava veAfrika vakarasa tariro mukondinendi iyi, inoraramisa matanho evanhu. Rega iwe uve chikamu chakakosha cheichi chiroto chiitike kuburikidza neyako, chikuva chedu kune vese ...
Isu tinotsvaga Commerce Services yezvatinoda pakurarama kwedu kwepamhepo uye zvinoverengera zviitiko zvekugadzira.
Iwe unozove nokudzidziswa zvisati zvaitika, uye mushure mekusimbiswa, iwe unenge uchingoita chiitiko.
Mubairo wako unobva pamakumi mashanu ezviuru zveCFA uchienda kune anopfuura zviuru zana nemazana mashanu ezveCFA, kana iwe ukashanda uye uchinyatsotevedzera mirairo yedu.
kudzorera kweMicrofinance Ekuunganidza maAgents
Kugara shamwari nehama dzako, akanaka kana akaipa zano?